Seemaa: Falaasama seera uumaa fi uumama Oromoo – Oromedia
Home » Aadaa » Seemaa: Falaasama seera uumaa fi uumama Oromoo
(Oromedia, Finfinnee, Gurraandhala 17 ,2017)-Oromoon waan walaabuu keessa jiru mara akkatti huabtuu fi sirneessu qaba. Akka ilaalchaa fi hubannaa Oromootti, waanti marti seera ittiin uumame, seera ittiin masakamuu fi dhalootaa dhalootatti diroo darbu qaba. MAddi seerotaa fi sirnoota kunneenii, akka hubannaa Oromootti, Seemaa dha. Seemaan seera uumaafi uumamaa ti. Barruun kun Seemaa kan Waaqni akkaataa itti uumama mara uumeefi dhugaan Waaqaa akkamiin mul’achuu akka eegale bal’isee ibsuu kan of keessatti qabateedha.
Previous: የቦረና ኦሮሞ አባ ገዳዎች (1467 – 2016)
Next: Qabsoo Bilisummaa Oromoo Keessatti Shanee Jechuun Maal Jechuudha?